Restaurant Dinnerware Wholesale | 28 Seramika
Misakafo miaraka amin'i Hosen Valo roa, Misakafo Miaraka amin'izao tontolo izao
Kitapo fisakafoanana porcelain
Varavarankely sy zava-pisotro
Ny antsipiriany rehetra dia hevitra hafa, tontolo hafa ao amin'ny Hosen Plates novokarina tamin'ny teknika famokarana maoderina.
Ny sakafo dia iray amin'ireo traikefa farany mampiray ny chef sy ny olona. Faly izahay mahita fa ny takelaka sy ny vilia baolina SPOT avy amin'ny Hosen Two Eight Color Collection dia maneho izany toe-tsaina mafana izany ary mifanaraka amin'ny fanirian'ny chef.
TEXTURE COLLECTION - 2021 Famolavolana vaovao amin'ny mari-pana ambony Porcelain Dinnerware Sets Unique Design Ceramic Sets for Restaurant Hotel
Ny kojakoja tsy manam-paharoa misy loko mena sy maitso, misy endrika matte sy manjelanjelatra, miaraka amin'ny endrika samihafa, dia azo ampiasaina handravaka tsara ny latabatra fisakafoanana misy sakafo. Ary manome fahafaham-po ny fisainan'ny chef samihafa.
COPPER BLUE - Morden Style Gradient Gre en Glossy Porcelain Restaurant Dinnerware Sets amidy ambongadiny
Ny glaze miloko mihetsiketsika no sopt mamirapiratra amin'ity fanangonana ity. Avy amin'ity kojakoja fisakafoanana fisakafoanana vaovao ity, ny endrika samihafa sy ny habeny samihafa ho an'ny safidinao. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny fanasan-damba sy microwave ary koa amin'ny scratch-proof.
LOTUS BLUE - 2021 vokatra vaovao kojakojan-databatra porcelain manga, kojakoja fisakafoanana fisakafoanana glazed miaraka amin'ny fomba amam-panao
Iray amin'ireo kojakojam-pisakafoanana seramika manga vaovao sy miavaka, tsy miaraka amin'ny lokon'ny lanitra manga ihany, fa mitambatra amin'ny ranomasimbe manga manga ihany koa. Miaraka amin'ny fiantraikany hita maso, ataovy matsiro sy tsara tarehy ny sakafonao.
JUNGLE MAITSO - Toeram-pisakafoanana seramika maitso mavomavo amin'ny fomba rustic, kitapo AB ho an'ny trano fisakafoanana
Lovia trano fisakafoanana maitso vaovao amidy ambongadiny. Ny fitaovana fisakafoanana lehibe isan-karazany amin'ny endrika varios, azo alaina amin'ny trano fisakafoanana tsena any Azia Atsimo Atsinanana. Izy ireo dia mateza sy azo antoka ho an'ny fanasana vilia sy ny microwave.
Raha mila fanamboarana manokana ho an'ny teableware hevitrao manokana ianao, avelao ny serivisy fanamboaran-tena matihanina an'i Hosen hanatanteraka io hevitra io.
1. Fanontaniana: Ny mpanjifa dia manolotra ny sary na manao sary momba ny hevitra miaraka amin'ny fepetra takian'ny deatil, ny refy, ny fitaovana ary ny fepetra takiana.
2. Famolavolana: Ny ekipan'ny mpamorona dia mamoaka sary 3D ho fanamafisana ny famolavolanao, ary avy eo dia miasa amin'ny santionany. Ny ekipa dia nandray anjara hatramin'ny nanombohan'ny tetikasa iray mba hiantohana ny vokatra namboarina tsara indrindra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.
4. Fitantanana ny kalitao: Mba hanamafisana ny rafitra avo lenta, dia manao vokatra izahay& Rafitra fitantanana kalitao mahomby.
Ny tanjonay dia ny hanome fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny kalitao avo lenta sy azo itokisana mba hahazoana antoka fa ny mpanjifa tsirairay dia afaka mahazo aina sy matoky tena amin'ny vokatray ao anaty kovetany. Hosen Two Eight Ceramic vokatra dia mahita be dia be ny fampiharana azy ireo eny an-tsena noho ny prooerties mahafinaritra.
White Tableware Collection mahafeno ny fepetra ho an'ny ampahany amin'ny Hotely, toy ny Lobby, Buffet, trano fisakafoanana manokana, Main Dinning, Bar...Mifandraisa amin'ny antsipiriany bebe kokoa
VAHAOLANA FANOFANA FANAMBADIANA
Charger takela-bato amin'ny shinning volamena, volafotsy dia afaka hihaona amin'ny fanontaniana avy amin'ny Rental mpanjifa izay mila ity raitra tableware fampisehoana amin'ny hetsika.Glass Charger takelaka koa mahafeno izany fangatahana manokana.
Color Tableware Collection mahafeno ny foto-kevitra samihafa momba ny trano fisakafoanana, FIRE COLLECTION, URBAN COLLECTION, FOGS COLLECTION...Kitiho raha mila trano fisakafoanana bebe kokoa hanamarinanao
FITAOVANA DINNER MARKET SUPER
Hosen Two Eight Ceramic dia nanolotra fitaovana fisakafoanana ao anaty fonosana napetraka, indrindra ho an'ny 18 pcs isaky ny kitapo, 24pcs isaky ny kitapo. Ampidiro ao anaty fonosana azo antoka ary miantoka ny fiarovana ny entana mandritra ny fitaterana na fivarotana an-tserasera.
Hosen Two Eight Ceramic ho mpanamboatra latabatra hatramin'ny 1998
Miaraka amin'ny faritra famokarana 30,000 metatra toradroa, ny orinasa dia nomena fahaiza-manao famokarana tsara, ekipa matihanina, fahaiza-mamokatra avo lenta, fitantanana maoderina henjana. Miaraka amin'ny fitambaran'ny asa tanana nentim-paharazana sy ny teknolojia maoderina, Two Eight Ceramic dia manaraka ny politikan'ny famoronana vokatra vaovao sy fikatsahana fomba kanto; manome vokatra mahafinaritra izahay mba hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa samihafa.
Lazao anay fotsiny ny zavatra takinao, afaka manao mihoatra noho izay azonao sary izahay.
Contact Sales ao amin'ny JANE LEE